Statistics dzinoti Apple inorasikirwa nemhepo mune dzidzo | IPhone nhau
Kunyangwe muSpain isiri chinhu chakadzika midzi, zvirinani munzvimbo dzedzidzo yepamberi peyunivhesiti, kune dzimwe nyika kuri kuziva kugadzirisa zvakanaka pakushandisa tekinoroji nyowani munzvimbo yechikoro, nenzira iyi ivo vanobatsira vadiki kuti vawane iyo Batsirwa zvikuru nemidziyo uri pamunwe wako, zvichiita kuti nzira yaunodzidza nayo zvidzidzo ive nani. Zvisinei, Windows, iOS uye macOS vari kutsiviwa mumakirasi nemamwe marudzi emidziyo ine mutengo unozivikanwa wakaderera, kunyangwe uchirasikirwa nehumwe hunyanzvi hunonakidzwa nemidziyo iyi.
Chikwata che Futuresource yaita huwandu hwemakore matatu apfuura, matinogona kuona kuti Windows, macOS uye iOS zvakadonha zvakadii mukirasi. Nenzira iyi, zvishandiso zvakachipa senge izvo zvinosanganisira Chrome OS zvakura kubva pa38% kusvika 50% muUnited States of America. Haisi iyo yakafanana njodzi kune imwe nyika yepasi, kupi Android yakatambura kudonha kwakakura kubva ku36% kusvika 17%, ichisiya hurongwa uhu hwese hwekukura kuWindows yeMicrosoft, inomira semutungamiri akajeka aine 65% yemugove, uko Windows 10 iri mhosva yakajeka yekubudirira kunozivikanwa uku.
Zvichakadaro, macOS neIOS vane zvakasara zviripo, muna 2014 pakange paine kuvepo kweanosvika 4% kunze kweUnited States of America, iyo yakakwira kusvika pa6% muna2015 asi yakanyangarika muna2016, pakati pese ari maviri masystem anoshanda ivo havatore kunyangwe 3% yeiyo yakazara chikamu chemusika wekudzidzisa.
Windows inosarudzwa muzvikoro zviri kunze kweUnited States of America, kufambira mberi kwakaunzwa neWindows 10, kurerukirwa kwekushandisa uye huwandu hukuru hwebudiriro shure kwaro, zvakawana zvakanaka kambani yeRedmond kuti ibudirire.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Statistics dzinoti Apple inorasikirwa neshiri mune dzidzo
Musi waKurume 25, guta reGerman reCologne rinozovhura yechipiri Apple Store